विदेशमा शिक्षा हासिलको चाहना हुनेले पढ्नै पर्ने अन्तरबार्ता - Resunga News
September 20, 2017 samundra
टोकियोका सल्लाहकार श्री गौरव थापासंग साक्षात्कार ।
गौरवजीले एसएलसी र आईएससीलाई सैनिक आवासीय महाविद्यालय, भक्तपुरबाट गर्नुभएको हो । त्यसपछि उहाँ Ritsumeikan एशिया प्रशांत विश्वविद्यालय, जापान बाट अन्तरराष्ट्रिय प्रबंधनमा स्नातक पुरा गर्नु भयो । स्नातक पछि, उहाले विभिन्न दूरसंचार, सेमीकनडटर र प्रीमियम र सुपर स्पोर्ट्स कार बनाउने विश्व विख्यात कम्पनीहरूमा वित्तीय विश्लेषक, व्यापार योजनाकार र मार्केटिंगको रूपमा काम गर्नुभयो | उहाँ जापानको शिक्षा प्रणाली, आप्रवास प्रक्रिया र स्नातकोत्तर पछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको जागिर अवसरहरूको बारेमा जानकार हुनुहुन्छ । नेपाली विद्यार्थीहरू लाई जापानमा उच्च शिक्षा हासिल र स्नातक पछिका क्यारियर सम्भावनाहरू बारेमा हाम्रो टोकियो कार्यालयमा केही समय को अन्तरक्रिया ।
कृपया हामीलाई बताउनुहोस् तपाई जापानमा कसरी आउनुभयो?
म आज भन्दा १४ वर्ष अघि जापान आएको हु । त्यस बेला जापान शिक्षाको लागि खाँसै प्रख्यात थिएन । निस्सन्देह पहिला देखिनै उनीहरूका महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरू विश्व स्तरीय हुन्। उनीहरूले हरेक वर्ष जित्दै आएका नोबेल पुरस्कार जस्ता उच्च पुरस्कारले यो कुरा त पुस्ट गर्छ | केवल गारो यो थियो कि जापानमा तपाइले जापानी भाषाको साथ अध्ययन सुरु गर्नुपर्छ। त्यस बेलाका धेरै विद्यार्थीहरू जस्तै म पनि अमेरिका अष्ट्रेलिया जान चाहन्थे, तर जापानले मलाई राम्रो छात्रवृत्ति प्रदान गर्यो जुन अरू देशले दिएनन् । त्यसैले नै मैले जापान आउने निर्णय गरे |
त्यसबेला अमेरिका, यूके र अष्ट्रेलिया गएका साथीहरू सँग तुलना गर्दा आफूलाई अहिले कसरी हेर्नु हुन्छ ?
सुरुमा जब मैले अमेरिका वा यूकेको सट्टामा जापान जाने निर्णय गरे तब सबैले सोचेका थिए कि मैले राम्रो निर्णय लिएन । मैले सही निर्णय गरेँ कि गरिन भने मलाई पनि शंका थियो। अहिले आएर, १४ वर्ष पछि, म गर्वका साथ भन्न सक्छु कि मैले जुन उपलब्धिहरू हासिल गरेको छु त्यो अरूहरूले अन्य देशहरूमा पाउन धेरै नै संघर्स गर्नु पर्छ। जापानले मलाई रोजगार, राम्रो आम्दानी र विश्वव्यापी अनुभवका धेरै अवसर प्रदान गर्यो। अन्य देशहरूमा म जस्तो औसत विद्यार्थीको लागि यो सम्भव नै छैन।
अहिले जापान नेपाली विधार्थीका माझमा धेरै नै लोकप्रिय छ नि, किन होला ?
सबै भन्दा प्रमुख कारण त जापानले अन्य देशहरू भन्दा सजिलै विद्यार्थीहरूलाई भिसा प्रदान गरिरहेको छ। धेरै नेपाली मान्छेले यस प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरे त्यसैले अहिले उनीहरूले धेरै विद्यार्थीहरू इन्कार गर्छन्। जापानले यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छ कि केवल वास्तविक विद्यार्थीहरू मात्रै जापानमा आउन। यो एक धेरै गाह्रो काम हो। त्यसैले धेरै पटक नक्कली विद्यार्थीहरूले भिसा पाउन्छन् भनी साँचिकै पढ्न जाने विधार्थी को भिजा रीजेक्ट हुन्छ।
जापानमा नेपाली विद्यार्थीहरूको अवस्था कस्तो छ ?
धेरै राम्रो छैन। किनभने नेपालका धेरै परामर्शदाताहरू विद्यार्थीहरू लाई पर्याप्त तयारी बिना नै जापान पठाउँदै आएका छन्। धेरै विद्यार्थीहरू यस्तो विद्यालयहरूमा पनि पठाइएका छन् जुन गाउँमा छन्। नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जापानमा पढ्न र बस्न को लागि पैसा कमाउन जरुरी छ। जापान को गाउँमा जादा जापानको बारेमा तपाइको ज्ञान सीमित हुन्छ र तपाई आर्थिक रूपमा पनि कमजोर बन्नुहुन्छ । अर्को कुरा जापानी परामर्श दाताहरूलाई जापानको बारेमा धेरै थाहा छैन ।
धेरै नेपाली परामर्श दाताहरू विद्यार्थीहरूलाई सही जानकारी प्रदान गर्न सक्षम छैनन् ?
किनकी जापान जापानीज भाषामा धेरै निर्भर भएको देश हो। देश बुझ्न र प्रक्रिया थाहा पाउन, तपाईलाई जापानी समाजको अभिन अंग हुनु आवश्यक छ। तपाईले जापानमा नै अध्ययन,बसोबास र काम गरे मात्रै राम्ररी जापान बुझ्नु हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई राम्रो जानकारी प्रदान गर्नु सक्छ । नेपालमा हामीले थुप्रै सल्लाहकारहरू देख्यौं जुन जापानमा कहिल्यै पनि गएका छैनन् वा जापानको बारेमा पर्याप्त अनुभव छैन। अनि अर्को कुरा यदि तपाई आफै नै सफल हुनुहुन्न भने विद्यार्थीहरूलाई सफलताको बाटोमा कसरी मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ?
र मिराइ कनसलटेन्सी कसरी यी समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्दैछ ?
MIRAI ACADEMY एक जापानी कम्पनी हो I हामी सँग जापानका विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूको लागि नेपाली विद्यार्थीहरू पठाउने क्षमता छ । हामी जापानका स्कूल र विश्वविद्यालयहरूसँग नजिकै भएर काम गर्छौं। हामी स्कूलहरू को भ्रमण गर्छौं, उनीहरूको सुविधाहरू हेर्छौ,विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूसँग कुरा गर्छौं र विद्यार्थीहरू यो संस्थानमा अध्ययन गरे पछि भविष्यमा सफल हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भने कुरा बिस्तारमा जाँच गर्छौ । हाम्रो लागी हाम्रा विद्यार्थीहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्। विद्यार्थीहरूको भविष्यमा हामी कुनैपनि सम्झौता गर्न तयार छैनौ। यस कारण हामीले जापान मा नै बसेर अध्ययन र काम अनुभव भएका सल्लाहकारहरू नियुक्ति गरेर सेवा दिइ राखेका छौं। जापान गए पछि हाम्रो जापान कार्यालयको सहयोग पाउन सक्छन् । साथै हामी हाम्रो विद्यार्थीलाई जापानी भाषा ५ वर्ष भन्दा बढी जापानमा भाषा अध्ययन गरेका शिक्षक मार्फत सिकाउँछौं।
तपाई विदेशमा अध्ययन गर्ने सोचिरहेका विद्यार्थीहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
म विद्यार्थीहरूलाई पहिले आफै जापान को बारेमा केही अनुसन्धान गर्न र त्यसपछि एक राम्रो कन्सलटेन्सीको छनौट गर्ने सुझाव दिन्छु । विद्यार्थीहरूले धेरै कन्सलटेन्सीहरूसँग कुरा गर्न आवश्यक छ। यदि तपाइँ आफ्नो कागतपत्रहरू कुनै गैर अनुभवी बाट बनाउनुहुन्छ भनि तपाइँको कागतपत्रहरू अस्वीकृत हुने जोखिम बडी हुनछ। त्यसैले तपाइले हरेक साना साना कुरामा सावधानी अपनाउन आवश्यक छ। MIRAI को सबै प्रक्रिया अरूको भन्दा फरक छ। हामी तपाइको भिसाको बारेमा निश्चित नभएसम्म तपाइको भिसा प्रक्रिया अगाडि बदाउदैनौ | हामी तपाईलाई पहिले सबै कुराको तयार पार्छौं। यो प्रक्रिया मा अलि धेरै समय लाग्ला तर यसले विधार्थीहरुको जापान जाने सपनालाई साकार पर्दछ।
← वीरगन्ज महानगरमा कांग्रेसले खाता खोल्यो
घरेलु मैदानमै हार्‍यो रियल मड्रिड →
पश्चिम रुकुममा माओवादीका जनार्दन शर्माको अग्रता कायमै
December 8, 2017 resundxs Comments Off on पश्चिम रुकुममा माओवादीका जनार्दन शर्माको अग्रता कायमै
परिवारभित्र अभिभावकले विर्सन नहुने पाँच कुरा
July 26, 2020 resundxs Comments Off on परिवारभित्र अभिभावकले विर्सन नहुने पाँच कुरा
July 6, 2020 resundxs Comments Off on ‘नेकपा एकतालाई खलल पुग्ने काम नगरौं’